China 1,2m inonyungudika-kuputika machira ekugadzira machira fekitori nevatengesi | Hongli
Yakasarudzika jekiseni rakananga uye kudzorera meltblown giredhi mitsara yekugadzira yevatengi vane yakatarwa kubva ku400mm-1600mm. Mutsetse wekugadzira unodzokorora unogona kushandiswa kwete kungogadzira meltblown machira, asi zvakare mukugadzirwa kwezvinhu zvinogadzirisa zvemvura nezvinogadziriswa zvemhepo. Liquid filters zvinhu zvinonyanya kushandiswa muminda yekurapa kwemvura, peturu uye makemikari indasitiri, ine yunifomu chimiro, yakakwirira filtration kurongeka, pachena maitiro, uye yakasimba yekusvibisa inobata kugona uye yakareba basa rehupenyu. Mhepo dhizaini zvinhu zvinonyanya kushandiswa mumhepo kuchenesa masisitimu, kusanganisira asi isingagumiriwi mukati, yekuchenesa mhepo, yemhepo mhepo yekuisa fetera, nezvimwewo zvine zvakanakira pamusoro uye yakakwirira guruva kukwanisa.
Iyo tekinoroji nheyo yekunyungudutsa kupuruzira
Melt-blown isiri-yakarukwa maitiro ndeye kushandisa yakakura yeanopisa mweya yekukwevera kutetepa kuyerera kuyerera kwepolymer inonyungudika ichibva kubva kune spinneret gomba remusoro wekufa, kubva ipapo iyo ultrafine fibers inogadzirwa uye inobvisirwa pane yekuisa skrini kana roller, uye vozoita isina-kuvezwa nekuzvisunga.
Yese yakanyungudika-yakarukwa micheka yekugadzira ino gadzira ine screw extruder, giya yepombi, pombi yekusungunuka, nyungudika-kufa musoro, mhepo yekufambisa, mudziyo wekugonesa, imwe gamuchira mambure, firita, seti ye electrostatic electret uye imwe set ye otomatiki yekutsvedza uye yekudzosera muchina. Pakati pezvikamu izvi, iyo inonyanya kukosha ndeyekunyungudika-kufa kufa musoro.
Iyo polymer inonyungudutsa nzira yekugovera. Sisitimu iyi inoona kuti iyo polymer inonyungudika kuyerera nenzira yakafanana pakureba kwenyonganiso uye ine yunifomu yekuchengeta nguva, kuitira kuti ive nechokwadi chekuti inonyungudika nuzzle isiri-yakarukwa ine nzvimbo yakaenzana pazivo mune hwakazara. Parizvino, yekubika-mhando polymer nyungudhiyo nzira yekuparadzira inonyanya kushandiswa mukunyungudika kupuruzira kuita. Nekuti iyo T-mhando yekuparadzira system haigone kugovera iyo fluid. Uye kufanana kweipuru yakanyungudutswa inoenderana chaizvo nemusoro wakanyungudika-kufa. Kazhinji, iyo machining chaiyo yekusungunuka inofa yakakwira, saka iyo inodhura kugadzira. Kana iri iyo heater yemhepo, iyo inosungunuka-kupepetwa machira ekugadzira machira inoda mweya yakawanda inopisa. Iyo inomanikidzwa yemhepo inobuda kubva kumhepo compressor inoendeswa kumhepo heater yekudziya mushure mekushomeka kwemafera, uyezve kune yakanyungudutswa jekiseni yekuumba. Air heater mudziyo wekumanikidza, uye panguva imwechete yekupikisa oxidation yemhepo yekushisa yakanyanya, saka zvinyorwa zvacho zvinofanirwa kunge zvisina tsvina.
Kudzorera kugadzira mutsara wekugadzira prototype
Yakasarudzika 400-1200mm kudzokorora yakanyungudutswa-yakaputirwa jira rekugadzira mutsara
Prototype yemhando yakananga jekiseni necheni yekugadzira line:
Yakasarudzika 400-600mm mambure keteni yakanyunguduka-kuputika jira rekugadzira mutsara
Kuwedzerwa kwekuona kwekutenderera kufa
* Iyi tambo yekugadzira inosanganisira yega screw extruder, yakanyungudika-yakaputika extrusion furu, transfer bhandi, mhepo yemuchina ... nezvimwe.
* Yakazara otomatiki kubva pakudya zvekushandisa kusvika pakupedzisira yakanyungudutswa yakaputirwa machira kumuchina, hunyanzvi hwekugona, kumhanya kwakasimba, PFE inogona kusvika 95 uye pamusoro.
* Chigadzirwa chekugadzira kubva 280kg ~ 300kg, iyo chaiyo yekugadzira simba inotsamira pane extruder muchina uye yakanyungudutswa yakarohwa nefuruu saizi.
2.Production Rudzi: Kudzorera & Vertical Blow Downward
4.Inoshandiswa Chinhu: PP
5.Product Yakakura: 1200MM
6.Production Kugona: 280 ~ 300KG / 24Hours
7.Akatumirwa Max. Speed: 5M / Minute
8.Total Simba: 60KV
1.55 Imwe Cheji Chekuwedzera: 1set
3.Air Pre-kupisa Chipenga
7.Servo isingazununguki uye yekucheka dhiva
Kubata Mushure meKutengesa:
1.Installation Vhidhiyo Rutsigiro, uye vhidhiyo kutaura kwekukurukurirana mumamiriro ekugadzirisa ane dambudziko diki.
2.Free Spare Zvikamu: Dzimwe Worn zvikamu like
3.Whole Machine Waranti: rimwe gore
400-600 inonyungudika-kuridza jira rekugadzira mutsara